Kutenga pamhepo? Semutengi iwe unofanirwa kuziva kodzero dzako | ECommerce nhau
Kutenga pamhepo? Semutengi iwe unofanirwa kuziva kodzero dzako
MuSpain, shopping online ndiwo marongero ezuva. Zvinoenderana ne Ongororo yeOCU, vashandisi vanotenga pamhepo zvakanyanya zvemagetsi, zvekufambisa uye zvekuzorora zvigadzirwa uye zvipfeko. Kuwanikwa, kurerukirwa, uye mitengo yakanaka yezvitoro zvepamhepo zvinokurudzira vatengi kusarudza kutenga pamhepo. Nekudaro, vamwe vachiri kuramba, vachifunga nezvematambudziko anogona kunge usiri kugutsikana uye ukamanikidzwa kudzorera chawakatenga. Asi vatengi vanofanirwa kuziva kuti kana vachitenga online vanochengetedzwa zvakaenzana sekunge vakatenga muchitoro chemuviri, zvakatonyanya kudaro.
Muchokwadi, iyo nyowanikumitemo yeEuropean Union mune nyaya dze eCommerce inowedzera kuchengetedzwa kwevatengi kana uchitenga online. Vatengi vanofanirwa kuziva yavo Kodzero. Asi, mutemo uyu uri kuteererwa? Unoziva here kuti vatengi vane kodzero yei? Kuti uone izvi, OCU yakaita bvunzo inoshanda muzvitoro zvine mukurumbira vachitenga zvigadzirwa zvemagetsi izvo zvavakazodzoka kuzoona sevhisi neruzivo rwunopihwa muzvitoro.
Izvi ndizvo mhedziso Izvo izvo OCU yakawana:
Mapeji ese akateerera uye akatumira chigadzirwa mune zvakabvumiranwa mamiriro. Ivhareji yekuendesa nguva yaive, paavhareji, mazuva matatu.
Muzviitiko zvese, chigadzirwa chinogona kudzoserwa pasina matambudziko.
Mari yacho yakapindwazve, kunyangwe zvisiri nguva dzose ipapo.
Kudzoka hakuna mahara: mutengi anotakura mari yekudzosa. Mune zvimwe zvitoro havana kudzorera mari yekutanga yekutumira.
Kubhadhara harisi dambudziko.
Chibvumirano chekutenga hachina kugutsa zvakanyanya: zvivakwa gumi nezvitatu zvaiita senge hazvikurudzirwe, nekuti zvinosanganisira zvikamu zvisingaenzaniswi zvemutengi, senge simba rekudzima unilaterally odha, kubviswa kwebasa kana paine zvikanganiso zvemutengo, kudzikiswa kwekudzoka chigadzirwa kana kavha yakavhurwa. Iyi ndiyo mienzaniso yezvikamu zvisina kujeka zvakaenzana izvo OCU yakaona pane mamwe mapeji ewebhu.
Tichifunga zviri pamusoro, senge online shopper Iwe unofanirwa kufunga zvinotevera, nekuti uri mukati mekodzero dzako:
Ivo vanofanirwa kukupa iwe chibvumirano zvinyorwa uye kusimbiswa kwekutenga zvisati zvaitika.
Une mazuva gumi nemana ekarenda (kusanganisira mazororo) kushandisa kodzero yako yekumisa kutenga: mukati menguva iyoyo iwe unofanirwa kuzivisa iyo nzvimbo yaunoda kuidzosera.
Mutengo wekudzoka unotakurwa nemutengi.
Mutengesi ane nguva yemazuva gumi nemana yekubhadhara mutengi nemari yepakutanga yekutenga uye mari yekutumira (dai akabhadharwawo nemutengi), uye anogona kudiwa kuti apetwe kana zvikanonoka.
Iyo yepamutemo vimbiso yekutenga inotora makore maviri.
Zvimwe zvinogadzirwa zvisina kunyatsoteerera mutemo uyu: iyi kesi yezvakagadzirwa, zvakavharwa zvigadzirwa (CD, kirimu), isingakwanise kudzoserwa nekuda kwehutano kana zvikonzero zvehutsanana.
Uye zvakare, iyo OCU inotsvaga akateedzana matanho ezvi dzivisa matambudziko mukutenga kwepamhepo, uye kuraira vatengi ku:
Ita shuwa yekuita transaction kubva kune yakachengeteka chishandiso: komputa, piritsi kana nhare ine yakagadzirira antivirus, yakagadziridzwa software uye yakavanzika Wi-Fi.
Tarisa kuti iwe uri pane yakachengeteka peji: https yakanyorwa muwebhu kero uye padiki pazasi.
Ita shuwa kuti paine ruzivo kana runhare runhare.
Kiredhiti kana prepaid kadhi, PayPal kana mari pakuendesa ndiyo yakachengeteka nzira dzekubhadhara, zvirinani pane kuendesa.
Sarudza kusarudza mapeji muSpanish, ine zita rebhizinesi muEuropean Union. Chinhu chakanakisa kusarudza mabhizinesi neiyo Confianza online chisimbiso.
Kana paine chero nzvimbo inomutsa fungidziro, zvitaure kumapurisa kana kuTelematic Crimes Group.
Semutengi, une kodzero dzako. Asi kuvatsvaga kunogona kutora nguva. Zvakanakisisa kutenga kubva kuzvitoro zvine mukurumbira uye zvine mukurumbira. Zviponese panjodzi. Muchinyorwa 61% yevatengi vemuchitoro chepamhepo vanovimba kurudziro yevamwe vashandisi iwe uchawana ruzivo rwakakosha kwazvo pamusoro penyaya iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Kutenga pamhepo? Semutengi iwe unofanirwa kuziva kodzero dzako
61% yevatengi vemuchitoro chepamhepo vanovimba kurudziro yevamwe vashandisi